Wasiir Kuxigeenka Caafimaadka DDSI oo Maanta Booqday Referal Isbitalka iyo Xarunta Daawaynta Dalka Jabuuti. - Cakaara News
Jabuuti(CN) Khamiis Oct-30-2014. sidii aad waraarkayagii horeba ula socoteen waxaa dalka jabuti ka socday shirweynihihii iskaadhiga caafimaadka ee dalalaka geeska afrika(Bariga Afrika). Hadaba wariyahayaga noo jooga Dalka Djibuti ayaa goor dhawayd ku soo xidhiay Studiowga shabakada CakaaraNews ee Magaalada Jigjiga wasiir kuxigeenka caafimaadka DDSI oo shirkaasi ka qaybgalay si aanu wax uga waydiino Xaalada shirka iyo Waftigiisa.
Wasiirka ayaa sheegay in shirwaynaha Iskaashiga Caafimaadka ee dalalka Bariga Afrika sanadkiiba mar la qabto islamarkaana ay sanadkan dalka Jabuuti martigalisay iyadoona lagaga wada xaajooday sii xoojinta iskaashiga iyo dabargoynta Cudurada faafa ee xuduudaha iskaga goosha.
Dhanka Kale Mudane C/fataax Siciid ayaa Carabaaby in wasiirka caafimaadka dowladda jabuuti Dr Kassim Isaak Ousman marlabaad manta kusoo dhaweeyay xafiiskiisa hogaaminta weftiyada ka kala socotay somalia, somaliland, kenya, itoobiya, yemen iyo wakiilada ka kala socday hay’ada caalamiga ah ee WHO iyo Unicef.
waxaa uu wasiirka caafimaadka ee dowladda jabuuti Dr kassim uga mahad celiayay dalaka geeska afrika dadaalka iskaahi ee loogu jiro cidhibtirka cudurka dabaysha wasiirka oo hadalkiisi wata ayaa sheeagay in uu kalsooni buuxda ku qabo in la cidhib tirayo cudurka dabaysha. balanqaadayna in dowldda jabuuti cidhibtiri doonto cudurka dabaysha, taageero buuxdana siinayso iskaahiga caafimaadka xuduudaha.
Sidoo kale Waxaa shirkaasi ka hadlay wasiirka caafimaadka DDSI mudane C/fataax Siciid oo uuga mahadceliyay dowladda jabuuti sida sharafta leh ee ay usoo dhawaysay weftiyadii dalalka geeska afrika iyo martigelinta shirkan caalamaiga oo si heersare ah loo soo agaasimay.
isagoo wasiir kuxigeenku hadalkiisi sii wata ayuu marlabaad uga mahad celiyay dowladda jabuuti iskaashiga adeega caafimaadka xuduudaha iyo guud ahaan adeega caafimaadka ee ay siiyaan bulshada itoobiya ee kunool dalka jabuuti. waxa uu wasiir-kuxigeenku intaa raaciyay in wasaaradaha caafimaadka itoobiya iyo jabuuti iska kaashan karaan tababarada dhakhaatiirta gaar ahaan takhasuska qalitaanka fistulad,a maadaama oo cusbitaalka keliya ee ku takhasusay daaweynta fistuladda geeska afrika ka jira uu ku yaalo Caasimada DFI ee magaalada Addis-ababa.
Intaa ka dib ayaa uu wasiir kuxigeenka Caafimaadka DDSI mudane C/fataax Siciid iyo Waftigiisii oo gadhqaadayay wasiirka caafimaadka Jabuuti ay booqdeen IsbitaalkaReferalka iyo Xarunta Daaweynta caafimaadka taranka ee dalka jabuuti halkaana kula kulmay dhakhaatiir itoobiyaana oo ka howgala cusbitaalka, booqdayna bukaaanka cusbitaalka.